‘दुई वटा सरकारी बैंक मर्ज गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकको संख्या १० मा झर्छ’ - Aarthiknews
‘दुई वटा सरकारी बैंक मर्ज गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकको संख्या १० मा झर्छ’
कृष्णबहादुर अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बैंक
नेपालको पहिलो बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड यहि कात्तिक ३० गते ८४ औँ वर्ष पार गरेर ८५ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसबिच यसले धेरै आरोह अवरोह भोगेको छ । बैंकिङ यात्राका स्वर्णिम युगका दिनदेखि अत्यन्तै कठिनतम वर्षहरु नेपाल बैंकले अनुभव गरिसकेको छ । अहिले पनि नेपालको पहिलो बैंकका रुपमा आफ्नो शाख रक्षा गर्दै समग्र वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिस्पर्धामा अब्बलबन्ने प्रयासमा केहि उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ, नेपाल बैंकले ।
नेपाल बैंकको इतिहास र यात्राको छुट्टै रोचक कथा छ । तर, यहाँ भने आज नेपाल बैंक कुन अवस्था छ र यसले कसरी आफ्ना आगामीयात्राका योजना बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्वादको सम्वादित अंश पेश गरेका छौं । प्रस्तुत छ– नेपाल बैंकको वर्तमान स्थितिदेखि नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रका चुनौति र अभ्यासहरुकाबारे उनै अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीः
नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकले सबैमा पहिलो हुन के कस्ता काम गर्दैछ ?
कम जनशक्तिबाट बढी प्रतिफल लिने काममा हामी लागेका छौं । पहिलेको भन्दा अहिले आधा नै जनशक्ति छ । तर, पर्याप्त मात्रामा शाखाहरु विस्तार गरिरहेका छौं । ६० को दशकको सुरुवातमा ९६ वटा शाखा रहेकोमा अहिले २१३ वटा त शाखा नै छ । सात वटा प्रदेश कार्यालय र ४७ वटा एक्टेक्सन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । तर, जनशक्तिको भार भने बढाएका छैनौँ ।
प्रविधिको प्रयोग र पहिलेभन्दा जनशक्तिको दक्षताका कारण यो सम्भवभएको हो । तथापि हाम्रो उत्पादकत्व भने अरुको तुलनामा कम देखिएला तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी ग्रामिण भेगसम्म पुगेर सेवा दिएका छौं । व्यवसायिकताभन्दा सेवालाई केन्द्रमा राखेका कारण मात्रै हाम्रो स्थिति यस्तो देखिएको हो । यदि व्यापारिक केन्द्रहरुमा रहेकाशाखाको उत्पादकत्व हेर्ने हो भने नेपालका कुनै वाणिज्य बैंकभन्दा हामी कम छैनौँ ।
भनेपछि नेपाल बैंक अहिले पनि सबै कुरामा अगाडि छ । यहाँसम्म कि सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा पनि होइन ?
हो, हामीले गाउँगाउँमा खोलेका शाखाहरुमा समाज सेवा बढी छ । व्यापार होइन । समाज सेवालाई हामीले अंकमा प्रतिफलका रुपमा देखाउ सक्ने कुरा भएन । राष्ट्रको आर्थिक उत्थानका लागि हामी गाउँगाउँमा पुग्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ ।
तर,पनि हामी व्यवसायिक रुपमा पनि अन्य बैंकहरु भन्दा धेरै कमजोर पनि छैनौँ । यदि सहर केन्द्रित शाखाहरुबीच मात्र तुलना गर्ने हो भने हामी अरु बैंकभन्दा सफल र सक्षम देखिन्छौं । फेरि पनि हामी १७ वटा शाखा विस्तारको योजनामा छौं । त्यो पनि सेवा भावले नै ओतप्रोत भएर गर्न लागि एको हो ।
के शाखा विस्तार बाध्यता हो ?
होइन । सरकारले एक स्थानियतहमा एक वाणिज्य बैंक पुग्नै पर्ने नीति ल्यायो । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा राख्न पालिकाहरु तोकियो । त्यो काम पुरा भइसकेको छ । अबको शाखा विस्तार भनेको हाम्रो आफ्नै योजनामा गर्ने हो । कतै व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट हुन्छ भने कहि सेवा केन्द्रित भएर शाखा विस्तार गर्छौ ।
अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा कमजोर छैनौँ भन्नुभयो । बलियो रहेको प्रमाण चाँही के हो ?
हाम्रो नेटवर्थ नै हुर्नुहोस न । गएको असार मसान्तसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये नेटवर्थको हिसावले हामी एक नम्बरमा थियौं । असोज मसान्तसम्मको रिपोर्टमा भने हामी नबिल बैंकभन्दा थोरै मात्र पछाडि छौं । क्यापिटल फण्डको हिसावले, क्यापिटल एडिक्योसीको अनुपातको हिसावले, निक्षेपको हिसावले हामी अगाडी छौं । कुनै पनि बैंकको स्वस्थता मापन गर्ने परिसूचकहरु यी नै हुन् । यसैका आधारमा हामी भन्न सक्छौं कि नेपाल बैंक बलियो र स्वस्थ बैंक हो ।
अहिले नै हाम्रो सिडी रेसियो, बेसरेट, कस्ट अफ फण्ड यी सबैमा हामी अरु भनदा कमजोर छैनौँ । हाम्रा सबै परिसूचकहरु ८५ वर्षे यात्रामा सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो बेग्लै विशेषयुक्त बैंक भएको कारणले पनि फरक छ । नेपाल देशको नाम जोडिएको बैंक हो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । र, नेपाली जनताको बैंक हो । बरु हामीले स्विकार गर्नु पर्ने कुरा यो हो की यो बैंकसँग नेपाली जनताको भावना जसरी जोडिएको छ त्यसलाई क्यास गर्न भने हामीले सकेका छैनौँ ।
यसका लागि पनि त कुनै योजना होला नि ?
हाम्रो टिममा यसबारे छलफल भइसकेको छ । अब हामीले हाम्रो क्षमतामा भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं । यदि त्यसो गरियो भने नेपालको पहिलो बैंक बैंकिङ क्षेत्रका धेरै सुचकांकहरुमा पहिलो नै बन्छ । निक्षेप संकलनको हिसावले हामी पहिलो बन्न नसकुलाँ । तर, त्यसले बैंक कमजोर भएको देखाउने त होइन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीमा अब केहि गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको छ । अब नेपाल बैक पहिलेको जस्तो कछुवाको गतिमा हिड्ने माइन्डसेटमा छैन । पहिले हाम्रो उपलब्धिको लक्ष्य नै सानो हुने गथ्र्यो । नगन्य वृद्धिमा हामी रमाउने गथ्र्यौँ । हामीले बनाएको पञ्चवर्षे रणनीतिक योजनाको अहिले चौथो वर्षमा छौं । र यसबेला सबै लक्ष्यहरु पुरा भइसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने हामीले आफ्नौ क्षमतालाई अवमूल्यन गरिरहेका थियौं । त्यसैले पाँचवर्ष पुरा नहुँदै त्यलाई पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ ढंगले ठूलो लक्ष्यसहित अगाडी बढ्ने काममा लागेका छौं ।
योजना र लक्ष्य त राम्रो बनाउनु होला तर सरकारी बैंक हो । राजनीतिक दवाबले कार्य सञ्चालनमा अवरोध आउँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि बैंकका आफ्नै सिमाहरु हुन्छन् भन्ने बुझेको छन । अब नीतिगत निर्णयले पर्ने असरबारे त हामीले बोल्न मिल्दैन । त्यो माथिको कुरा भयो । तर, कतिपय विषयहरुमा दलका नेताहरुले गर्ने फोनलाई चाँही हामीले दवाबका रुपमा बुझ्ने गरेको छैनौँ । उहाँहरुले कार्यकर्ताको मन राख्न फोन गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । हामी कुरा बुझाउँछौँ । मिल्ने मात्र गर्छौ । नमिल्ने यसकारण मिल्दैन भन्छौं । समग्रमा राजनीतिक दवाबले हाम्रो कार्यगतिमा अवरोध आएको छैन ।
यसबारे म यति भनौँ कि हामी स्वतन्त्र छौं । यो बैंकको सञ्चालक बोर्ड स्वतन्त्र छ । राष्ट्र बैंकले नियामकको रुपमा दिएका निर्देशन पालना गर्नै पर्छ । बोर्डले निर्माण गरेको नीति हामी लागू गर्छौ । यो क्रममा हामी पनि बोर्डलाई कतिपय सुझावहरु दिन्छौं । सहि सुझावलाई बोर्डले नीतिका रुपमा विकास गर्छ ।
नयाँ योजना र उत्साहका साथ काम गर्न अहिलेको जस्तो तरलता संकटले पनि अवरोध खडा गर्ला ?
यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै नेपालको वित्तीय बजारमा निक्षेपको वृद्धि र कर्जाको वृद्धिमा ठूलो खाडल देखियो । यो चार गुणाभन्दा बढीको खाडलले वास्तवमै एउटा ऐतिहासिक तरलता संकट गरेको छ । अहिलेसम्म जसरी बैंकहरुले तरलता आपूर्ति गरे त्यो थप थेग्नसक्ने अवस्था छैन ।
भयो के भने जुन मात्रामा निक्षेप बढ्छ भन्ने आशा गरिएको थियो त्यो बढेन । कम्तीमा दोस्रो त्रैमास पुरा नुहन्जेलसम्म त्यसको सम्भावना देखिदैन । त्यसपछि भने केहि सहज होला भन्ने आशा छ । किनभने त्यसपछि सरकारको विकास खर्च बढ्छ ।
तरलता अभावको अर्को कारण हो हाम्रो व्यालेन्स अफ पेमेन्ट(बिओपी)मा बढ्दै गएको नकारात्मक आकार । अब नयाँ तथ्यांकमा त्यो झन बढेको देखिन्छ । जबसम्म यो नकारात्मक बिओपी घटाएर सकारात्मकब नाउन सक्दैनौँ तरलताको समस्या रहन्छ । हामीले जसरी हुन्छ आयात घटाउनै पर्छ । लिक्युडिटी इन्फ्लो बढाउनै पर्छ ।
यो संकटकोबिच नेपाल बैंकले पनि आक्रामक लगानी गरेको देखियो नि ?
हामीलाई बजारले नै आक्रामक बन्न बाध्य पारेको हो । हाम्रा आफ्नै कार्यक्रम र योजना छन् । तर,पनि हामीसमेत झण्डै ९० प्रतिशतको सिडिमा पुगेका छौं । यसको कराण के हो भने हामीले लगानी बढाएर त्यस्तो भएको होइन । हाम्रो निक्षेपअरुले खोस्दा निक्षेप घट्यो सिडी रेसियो बढ्यो । कात्तिक महिनामै हाम्रो झण्डै आठ अर्बको निक्षेप गुमेको छ । अरुले लगेका छन् ।
किन यस्तो प्रतिस्पर्धा भयो ?
बैंक्हरुको बुझाइ के रह्यो भने ब्याजदर बढायो भने निक्षेप बढ्छ । तर, पूरै बैंकिङ प्रणालीमा पो निक्षेप बढ्नु पथ्र्यो त । कुनै एउटा बैंकले मात्रै बढाएर त सहजता हुने होइन । तर, साथीहरुले आफ्नो बैंकमा निक्षेप बढाउने अरुमा जे हुन्छ होस भन्ने सोचे । जसले गर्दा कुनै बैंकलाई सहजता भयो कुनैलाई निकै गाह्रो पर्यो । हुन त अरु बैंकहरुले पनि अफ्ठ्यारो परेपछि नै त्यसो गरेको हो ।
तर, बिडम्बना के भयो भने जसले खर्च बढायो त्यो राम्रो भन्ने देखिने भयो । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै दिर्घकालिन असर गर्छ । यस बेला भित्रिएको रोगले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्रै होइन हाम्रो मुद्रास्फीति मै समेत असर गर्ने देखिन्छ ।
मर्जरमा गएर बैंकको संख्या घटाइयो भने त यस्तो प्रतिस्पर्धा हट्ला नि ?
हो, नेपाल सरकारले यस्तो नीति लिएको छ । र, बैंकको संख्या घट्न आवश्यक पनि छ । जनता र ग्लोबल बैंक मर्जर भएर मात्रै यो उद्देश्य पुरा हुँदैन । अब सरकारी बैंक मर्जरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो बैंकमा सरकारको निर्णय नै प्रमुख हुन्छ । यस्ता बैंकहरु मर्जर गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सरकारले कसरी सोचिरहेको छ त्यो हामी र हाम्रो बोर्डभन्दा बाहिरको विषय हो ।
तर, के चाँही सत्य हो भने यदि स्वस्फूर्त रुपमा मर्जर गराउने हो र बैंकहरुको संख्या १० को हाराहारीम राख्ने हो भने दुई वटा सरकारी बैंक मर्ज गरिदिए पुग्छ । त्यसपछि त्यो बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अरु दुईटा बैंक होइन तीन वटा बैंक मिल्नु पर्छ । त्यो बाध्यता आफै सिर्जना हुन्छ । बैंकहरु फटाफट मर्जरमा जान्छन् । गर्नु पर्ने कुरा चाँही यहि हो की सरकारले नेपाल बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमध्ये कुनै दुई वटालाई मर्ज गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ ।